Falanqaynta Suuqgeynta 101: I Tus Lacagta! | Martech Zone
Talaado, September 30, 2008 Talaado, Febraayo 16, 2016 Douglas Karr
Markii aan u qoray maqaal Talent Zoo bishii hore, ayaan wax ka qoray kabaallaynta otomaatiga iyo isdhexgalka si loo kordhiyo loona xoojiyo istaraatiijiyadaada internetka, iyo sidoo kale shirkadaha ka caawiya ganacsiyada inay fuliyaan kuwaas fursadaha otomatiga suuq geynta.
Dhowr daqiiqo ka hor, waxaa la ii soo diray emayl Andrew Janis ee La Tashiga Macaashka warqadda Cad ee cusub ee ay sii daayeen natiijooyinkeeduna aad bay u xiiso badan yihiin. (Qaar ka mid ah qoraallada hoos ku qoran waxaa ku qoray Andrew e-maylkii uu soo diray… Ma aanan awoodin inaan sidoo kale erey u qoro!)
Xaaladda Falanqaynta Suuqgeynta
Warqaddan Cad waxay soo koobaysaa natiijooyinka sahan ay samaysay shirkadda 'Evantage Consulting' si loo soo bandhigo saamaynta Analytics kooxaha suuq geynta iyo ururada guud ahaan.
Wargeysku wuxuu ku warramay in inta shirkaduhu ay waqti iyo dhaqaale badan geliyaan Analytics, badankood wali waxay wajahayaan caqabada ah in xogta loo rogo ficil. In kasta oo sahanka lagu bartilmaameedsaday Magaalooyinka Mataanaha ah, waxaan aaminsanahay in natiijooyinka laga yaabo inay iswaafaqsanaadaan dhammaan warshadaha.
Inta badan suuqleydu waa maalgashi badan Analytics iyo kheyraadka, laakiin u wareegida suuq geynta xogta ku saleysan wali xaqiiqda kama ahan ururada badankood.
Doolarka suuqgeynta ayaa bilaabaya inay u wareegaan warbaahin la qiyaasi karo.
Waxaa jira koox ka mid ah kuwa waxqabadka sareeya kuwaas oo qaaday suuq-geynta xogta wadnaha.
Maareynta ayaa fure u ah marka loo gudbayo u-gudbinta xogta ku saleysan xogta, waana gaabis in la fuulo.
Marka la soo koobo, waa aragti rajo leh oo ku saabsan suuqgeynta… shirkadaha waxay bilaabeen inay si dhab ah uga faa'iideystaan ​​teknolojiyadda, cabbiraan natiijooyinka, oo ay ula jaanqaadaan si waafaqsan. Waxay bilaabayaan inay hel! Suuqgeynta ballaaran ayaa dhimatay, kororka suuqgeynta bartilmaameedka ah ee shabakadda ayaa ugu dambeyn sii kordheysa.
Ganacsatada tooska ah iyo kuwa keydka keydka macluumaadka ayaa tan qeylinayay sanado badan… waxay i xasuusineysaa Cuba Gooding ee Jerry McGuire taasoo ka dhigeysa inuu ku qeylinayo, "I tusa lacagta!". Shirkad walba madaxweynaheeda waa inuu isla wax ugu qeyliyaa waaxdooda suuqgeynta.
Tani waa war u wanaagsan macaamiisha iyo waliba suuqleyda. Marka macaamiisha ay la kulmaan xayeysiinta la bartilmaameedsaday oo runtiina qiimo leh, way ka jawaabaan. Markay suuqleydu sameyso waxa saxda ah, waxay garwaaqsadaan in dadaalka uu mira dhal leeyahay. Hadaadan dejin diinta yoolalka, kormeerka natiijooyinka iyo hagaajinta, waxaad si fudud darbiyada ugu tuuraysaa
Waad ka soo dejisan kartaa Warqadda Cadaaladda Falanqaynta Suuqgeynta Macaashka. Laga soo bilaabo websaydhka shirkadda: Tan iyo 1999, La Tashiga Macaashka ayaa ka caawisay ganacsiyada elektarooniga ah inay ku guuleystaan ​​adoo isku hagaajinaya suuqgooda, howlahooda iyo qeybaha IT-ga? waxtarka iyo waxtarka ugu badan.
Tags: midabka lacagtaka bixidala talinta ka bixidaITUS lacagtawarqad cadWarqad cad
Miyaad sameysaa Blogs?
Oktoobar 1, 2008 at 6:29 PM
Waan ku raacsanahay in wax walba ay sii kordhayaan bartilmaameedka. Markaan bilaabayo ganacsigeyga oo aan fiirinayo ikhtiyaariyada xayeysiiska waxaan is arkaa aniga oo si joogto ah ula socda xogta. Xayaysiisyadu waxay helayaan qasabno kuwaas oo aan lahayn. Kadib isku dayga inaan ogaado sababta oo aan u bedelo kuwa aan la riixin kuwa aan u maleynayo in la riixi doono.
Dhammaantood waxay ku saleysan yihiin cidda bartilmaameedkaagu yahay iyo waxa ay dhab ahaan doonayaan inay arkaan. Dadku guud ahaan way neceb yihiin xayeysiinta laakiin waxaan dareemayaa taas sababtoo ah waxaa lagu duqeeyey xayeysiisyo aan bartilmaameed ahayn muddo dheer. Haddii aad alaab dhigato hortooda inay faa iido ka heli karaan waxay u arki doonaan xayeysiiskaaga oo ku darsanaya waxyaabaha laga heli karo bartaada.